Iindaba -I-Mexico International Auto Parts Expo 2020
Igama lomboniso: iMexico International Auto Parts Expo 2020
Ixesha leMiboniso: NgoJulayi 22-24, 2020
Indawo: Iziko leMiboniso leCentro Banamex, kwisiXeko saseMexico
I-Central America (i-Mexico) i-International Auto parts kwaye emva komboniso wentengiso we-2020
I-PAACE Automechanika eMexico
Ixesha leMiboniso: Julayi 22-24, 2020 (kanye ngonyaka)
Umququzeleli: Umboniso weFrankfurt (USA) Ltd.
Imbuyekezo Frankfurt Exhibition (Mexico) Limited
Njengomboniso omkhulu nobaluleke kakhulu eMexico nakuMbindi Merika kwintengiso yentengiso, iinxalenye ezingama-20 zamazwe aphesheya ze-Auto nasemva komboniso wentengiso ye-Central America (Mexico) ziya kubanjelwa kwiziko leMiboniso laseBanamex, eMexico City ukusuka nge-22 ukuya kwi-24 kuJulayi, 2020. Bangaphezulu kwama-500 ababonisi abavela kwihlabathi liphela, kubandakanya nabo baseArgentina, China, Germany, Turkey, United States naseTaiwan. Ngaphezulu kwe-20000 iindwendwe zobungcali ezivela kushishino lweemoto eza kutyelela.
Ababonisi banelisekile ziziphumo zomboniso, ekwaqaqambisa ukubaluleka kwe-Automechanika Mexico kwishishini. Kwakhona, umboniso uye waba lelona qonga likhulu lokudibanisa abenzi bezigqibo ezinkulu kwintengiso yeemoto eMexico nakuMbindi Merika.
Ngexesha lomboniso weentsuku ezintathu, abenzi bezigqibo abaphambili abavela kwicandelo lemveliso elivela eMexico, eLatin America nakwamanye amazwe balapha ukufumana ezona mveliso zihambele phambili, iinkonzo kunye nentsebenziswano kumzi-mveliso wangaphakathi, ukuqonda ukuphuculwa komntu kwezithuthi nokwandisa ishishini labo.
I-China neMexico omabini la mazwe asaphuhlayo kwaye abalulekile kumazwe asakhasayo. Bobabini bakumanqanaba abalulekileyo ohlaziyo kunye nophuhliso. Bajongene nemisebenzi efanayo kunye nemiceli mngeni, kwaye la mazwe mabini abonelelana ngamathuba ophuhliso. Nge-13 kaNovemba ka-2014, uMongameli wase-China u-Xi Jinping wabamba iingxoxo kunye nomongameli wase-Mexico, i-PEIA, kwiholo enkulu yabantu. Iintloko zamazwe amabini zibeke umkhombandlela kunye nomgaqo wophuhliso lobudlelwane base China eMexico, kwaye bagqiba kwelokuba benze ipateni entsha yentsebenziswano "enye ezimbini ezintathu" ukukhuthaza uphuhliso lwase China Mexico ubambiswano olunobuchule.
IMexico lelinye lamazwe anenani elikhulu lezivumelwano zorhwebo olukhululekileyo emhlabeni. Iinkampani ezifumaneka eMexico zinokuthenga izixhobo kunye nezixhobo ezivela kumazwe amaninzi, kwaye zihlala zikonwabela unyango lwamahala. Amashishini onwabele ngokupheleleyo umrhumo we-NAFTA kunye nokukhethwa kwesabelo. IMexico ithathela ingqalelo uphuhliso olwahlukeneyo lwemveliso kunye neenkonzo zeshishini, kwaye iseke ngempumelelo ubudlelwane bezoqoqosho neYurophu, iAsia neLatin America ngezivumelwano zorhwebo zasimahla kunye nezivumelwano nemibutho yezoqoqosho.
KwiLatin America, iMexico ityikitye izivumelwano zokurhweba simahla (i-TLC) neHonduras, i-El Salvador, iGuatemala, iCosta Rica, iColombia, iBolivia, iChile, iNicaragua kunye neUruguay kwiimveliso zayo kunye neenkonzo zeshishini, kwaye ityikitye izivumelwano zokuhambelana kwezoqoqosho (ACE) kunye IArgentina, iBrazil, iPeru, iParaguay neCuba.
Ngabemi abamalunga nezigidi ezili-110, iMexico yeyona ntengiso yesibini ngobukhulu eLatin America kwaye yenye yezona zikhulu ehlabathini.
Icandelo lezithuthi lelona candelo likhulu lokuvelisa eMexico, libala i-17.6% yecandelo lezemveliso kwaye linika i-3.6% kwi-GDP yeli lizwe.
Ngoku iMexico lilizwe lesine ngobukhulu elizweni elithumela iimoto kumazwe angaphandle emva kweJapan, eJamani naseMzantsi Korea, ngokweCosmos yaseMexico. Ngokweshishini lezemoto eMexico, nge-2020, iMexico kulindeleke ukuba ibe yeyesibini.
Ngokwedatha yoMbutho woShishino lweeMoto eMexico (i-AMIA), imakethi yemoto yaseMexico iqhubekile nokukhula ngo-Okthobha u-2014, ngemveliso, ukuthengisa kunye nokuthunyelwa ngaphandle kwevolumu yokukhanya kwezithuthi. Ngo-Okthobha kulo nyaka, imveliso yezithuthi ezilula eMexico yafikelela kuma-330164, ukonyuka nge-15.8% kwangexesha elifanayo kunyaka ophelileyo; Kwiinyanga ezilishumi zokuqala, iziphumo ezongezelekileyo zelizwe zazingama-2726472, ukonyuka nge-8.5% ngonyaka-ngonyaka.
IMexico iye yaba lilizwe lesihlanu ngobukhulu kumazwe angaphandle elizweni ngamalungu eemoto kunye nezinto ezingavuthiyo, kwaye iimveliso zayo zinikezelwa ikakhulu kwizityalo zendibano zemoto eMexico. Ingeniso yonyaka ophelileyo ifikelele kwi-35 yeebhiliyoni zeedola, ibonisa amandla eshishini lezinto ezizenzekelayo, eliya kuthi liqhubeke nokunyusa ababoneleli belizwe. Ukuphela konyaka ophelileyo, ixabiso lemveliso yecandelo lezinto ezingasasebenziyo lidlule kwi-46%, okt i-US $ 75 yezigidigidi. Kuqikelelwa ukuba ixabiso lemveliso liza kufikelela kwi-US $ 90 yezigidigidi kule minyaka mithandathu izayo. Ngokwabasemagunyeni, ibanga lesi-2 kunye nenqanaba lesithathu leemveliso (iimveliso ezingadingi kuyilwa, ezinjengezikrufu) zinethemba elikhulu kakhulu lophuhliso.
Kuqikelelwa ukuba ngo-2018, imveliso yemoto yonyaka yase-Mexico izakufikelela kwizithuthi ezizizigidi ezi-3.7, phantse kabini imveliso ngo-2009, kwaye ibango layo lezinto ezizenzekelayo liya kunyuka kakhulu; Kwangelo xesha, ubomi obuqhelekileyo bezithuthi zasekhaya eMexico yiminyaka eli-14, ekwavelisa imfuno ebonakalayo kunye notyalo-mali lwenkonzo, ulondolozo kunye nokutshintsha izinto.
Ukuphuhliswa kweshishini lemoto laseMexico kuyakuxhamlisa abavelisi bamalungu ehlabathi. Ukuza kuthi ga ngoku, iipesenti ezingama-84 zabenzi behlabathi abali-100 abaphezulu batyale imali kwaye bavelisa eMexico.
1.Iinxalenye kunye neenkqubo: iinxalenye zeemoto kunye nezinto, i-chassis, umzimba, iyunithi yamandla ezithuthi kunye nenkqubo ye-elektroniki kunye nezinye iimveliso ezinxulumene noko.
2.Izixhobo kunye nokulungiswa: izixhobo zeemoto kunye nezinto ezizenzekelayo, izixhobo ezizodwa, ukuguqulwa kwemoto, uyilo olwenziweyo lobume benjini, ukuphuculwa koyilo, ukuguqulwa kwembonakalo kunye nezinye iimveliso ezinxulumene noko.
3. Ukulungiswa nokugcinwa: izixhobo zesikhululo sokugcina izixhobo kunye nezixhobo, ukulungiswa komzimba kunye nenkqubo yokupenda, ulawulo lwesikhululo sokugcina
4. It kunye nolawulo: Inkqubo yolawulo lweemarike zezithuthi kunye nesoftware, izixhobo zovavanyo lwemoto, isoftware yolawulo lomthengisi wemoto kunye nenkqubo, isoftware yeinshurensi yemoto kunye nenkqubo kunye nezinye iimveliso ezinxulumene noko.
5. Isitishi segesi kunye nokuhlamba imoto: inkonzo yesikhululo segesi kunye nezixhobo, izixhobo zokuhlamba imoto